मोबाईलमा सेभिङ: कुन मोबाईल लिने? Archives - Katuwal
Tag Archives: मोबाईलमा सेभिङ: कुन मोबाईल लिने?
अष्ट्रेलिया आएपछी पैसा कमाउनमा जोड भएपनि जोगाउनमा हामी खासै ध्यान नै दिँदैनौं। सित्तैमा हुने भिजा अप्लाई गर्न समेत २५० देखी ७५० सम्म खर्च गर्छौं किनकी हामीलाई त्यसमा लाग्ने समय नै छैन। सिफ्टको मुस्किलले हुने २०० डलरकै पछी लाग्नमा हतार हुन्छ र सानो कामको लागी दुई देखी तिन दिनको कमाई फाल्छौं। मोबाईल लिने भनेपछी हामी धेरैले ‘भोडाफोन’को प्लानमा आईफोन समातिहाल्छौं। पहिले पहिले आएका नेपालीहरुले भोडाफोन लिएको अनि सुरूसुरूमा भोडाफोन टु भोडाफोन फोन गरेको पैसा नलाग्ने अनि आईफोन पनि हुने भएकाले पनि हुन सक्छ धेरै नेपालीहरुले भोडाफोन नै लिने। त्यसो त भोडाफोनको प्याकेजमा मिल्ने क्रेडिटले नेपाल फोन गर्दा प्याकेजको तिर्नुपर्ने मासिक शुल्क ...